Shirka Qabyo qoraalka sharciga doorashooyinka oo la soo gabo gabeeyay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Shirka Qabyo qoraalka sharciga doorashooyinka oo la soo gabo gabeeyay
May 7, 2018 admin455
Kulankan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa ka qeyb galay sharci yaqaano ka kala socda Gobollada dalka, Guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka, Guddiga Xaduudaha, Wasaaradda Cadaaladda iyo Wasaaaradda Dastuurka.
Ka qeyb galayaasha kulanka oo koox koox loo qeybiyay ayaa dood qaadatay laba maalmood ka yeeshay qabya qoraalka sharciga doorashooyinka Qaranka Soomaaliya.
Gabagabada kulanka Agaasimaha Waaxda Federaalka ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdinaasir Xaaji Axmed ayaa sheegay in talooyinka ka soo baxay dooda ka qeyb galayaasha ay qaadanayaan, Wasaaraduna ay sii balaarinayso la tashiga qeybaha muhiimka u ah sameynta sharcigaan.
“Waxaan ku faraxsanahay fikradaha iyo talooyinka wanaagsan nala siiyay, waana diiwaan gashanay, waxay qeyb ka noqonayaan talooyinka nagu soo biiri doono ee ka imaanaya gobolka Benaadir, Dowlad Goboleedyada iyo qofkasto oo Somaali ah oo wax ku kordhinaya sharcigaan” ayuu yiri Agaasimaha
Agaasime Cabdinaasir waxa uu intaa ku daray inay hubin doonaan qabya qoraalka sharciga doorashooyinka inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka u degsan.
‘’Waxaan hubin doonaa inuu waafaqsan yahay Dastuurka dalka iyo shuruucda kale, waxaana marsiinaynaa 11 geeddi socod oo sharci walba uu marana waa uu maraya qabya qoraalkaan”
Kulankaan ayaa ka qeyb ka ah dadaalada Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta Soomaaliya ee dhameystirka sharciyada muhiimka u ah doorasho qof iyo cod ah inay ka hirgasho guud ahaan dalka.
Barnaamijka Xasilinta deegaannada Galmudug oo lagu qabtay Dhuusamareeb (Sawirro)
September 30, 2017 Cali Yare
Xildhibaano ka tirsan Galmudug oo looga yeeray Maxkamada sare
Galmudug: Wargelin ku socota Musharixiinta u tartamaya Aqalka Sare